I-Audi neVolkswagen bahamba phambili ngokuphatha kahle abathengi | News24
I-Audi neVolkswagen bahamba phambili ngokuphatha kahle abathengi
Cape Town – Inkampani yezimoto eziyintandokazi, i-Audi kanye neVolkswagen, izihambela yodwa ngezinga eliphezulu lokusiza kanye nokuphatha kahle amakhasimende ayo.
Ngokombiko wenhlolovo ka-2017 eyenziwe yi-Ipsos le nkampani yaseGermany izihambela yodwa ngokuphatha kahle amakhasimende uma ngabe ethenga izimoto eNingizimu Afrika.
I-Audi neVolkswagen bayaqhubeka nokugcina izinga eliphezulu kwinhlolokhono ye-Ipsos Competitive Customer Experience, yangonyaka ka-2016. I-Ipsos yenze inhlolovo kubantu abangaphezulu kuka-22 000 ngendlela abaphatheke ngayo bethenga izimoto kanye nezinga lokunikezwa kosizo ngo-2016.
OLUNYE UDABA: Izwe lizovala ukudayiswa kwezimoto ezisebenzisa uphethiloli, udizili ngo-2040
Zombili lezi zinkampani zithole ama-Gold Awards emkhakheni wePassenger Car kanye neLight Commercial Vehicle (LCV) Purchasing Experience okwesihlanu kulandelana. Zibonele ezinye izinkampani eziwinile ngezansi:
Indlela ophathwa ngayo uma uthenga
Izimoto ezincane zokuqhuba amabhizinisi
Silver – Ford
Izinga lokunikezela ngosizo
Ipsos quality awards 2017 - Purchasing Experience pic.twitter.com/foCxV2r84y
— Wheels24 (@Wheels24) July 28, 2017
Ipsos quality awards 2017 - Servicing Experience pic.twitter.com/OhLsbcoswu